Islam ọkà mmụta na-ekwu, Bitcoin bụ Dabara n'okpuru Sharia iwu - Blockchain News
A na-adịbeghị anya nkwupụta site islam ọkà mmụta na Bitcoin bụ Dabara na Sharia iwu nwere ike ịbụ ihe na-akpata n'azụ taa $1000 price anya, emeghe ahịa ka Muslim investors bụ ndị mbụ ejighị n'aka na ọ bụrụ na ndị cryptocurrency eru ịbụ ego n'okpuru Sharia iwu.
Bitcoin dara n'okpuru ụfọdụ nkọwa nke ego Sharia iwu - ihe ọ bụla na-aghọ a nakweere ebe dị ka ego site otu ma ọ bụ ọchịchị iwu.
Mufti Muhammad Abu Bakar, a Sharia ndụmọdụ na nnabata ojii na Blossom Finance na Jakarta, bipụtara a akwụkwọ na-achị na ụfọdụ ikpe, Bitcoin pụrụ n'ezie ịbụ Halal (kwere).
Otu ihe kwuru na-agụ:
"Na Germany, Bitcoin a ghọtara dị ka a iwu ego, ya mere ò ruru eru dị ka islam ego na Germany. Ná mba ndị dị otú ahụ dị ka US, Bitcoin kọrọ ukara iwu ego ọnọdụ ma a na-anabata nke ịkwụ ụgwọ na a dịgasị iche iche nke ndị ahịa, na Ya mere ò ruru eru dị ka islam omenala ego. "
Ọzọkwa, Bitcoin na blockchain technology mmezi nke ọma na Sharia akụziri. Fractional idobere ichekwa ego na bank ebe nwe nke ego aka bụ n'ihi ihe “unethical ego” (usury) a machibidoro iwu. N'ihi blockchain pụghị ịgọnahụ na-egosi nwe, ọ bụ n'ezie ihe Dabara na Sharia karịa ụlọ akụ, na a na-niile gụnyere ke akwụkwọ bipụtara Mufti Muhammad Abu Bakar.
Mere Coinbase ebubo na nke overloading na Bitcoin netwọk na otú SegWit ọrụ ?
Na otú ọtụtụ Coinbas ...
Russia ezube achọ cryptocurrency azụmahịa
Russia ezube achọ ...
Previous Post:Baidu malite blockchain dabeere ngwaahịa foto n'elu ikpo okwu
Next Post:Indian kaadị mgbanwe Coinsecure hacked